Casharkaan, waxaan ku arki doonaa maalmaha casharka oo ku qoran Ingiriis. Mawduuceena cinwaankeedu yahay maalmaha Ingiriisiga iyo Turkiga, waxaa sidoo kale jiri doona layliyo ku saabsan maalmaha Ingiriiska iyo weedho muunad ah oo ku saabsan maalmaha Ingiriiska. Waxaan sidoo kale ku soo dari doonaa hingaadda iyo ku dhawaaqida maalmaha af ingiriisi.
Waxyaabaha koorsadayada Ingiriisiga maalmeedku waxay ka kooban yihiin cinwaannada soo socda, markaad hoos ugu sii socotid xagga hoose ee bogga, waxaad arki doontaa mowduucyada soo socda.
Higaad iyo ku dhawaaqid maalmaha af Ingiriis
Maalmaha Ingiriisiga iyo waxa u dhigma ee Turkiga ah
Tusaalooyin weedho ku saabsan maalmaha ku qoran Ingiriis
Maanta waa ingiriis? Maanta waa maalin? ha weydiinin su'aalahaaga
Ha u sheegin waxa maanta ay tahay Ingiriisi
Imtixaan yar oo ku saabsan maalmaha Ingiriisiga
Jimicsi ku saabsan maalmaha Ingiriiska
Gabaygii maalmaha oo af-ingiriisi ah
Hadda aan marka hore ku siinno muuqaal wanaagsan oo maalmaha Ingiriiska ah.
Xusuusin Muhiim ah Maalmaha Ingiriiska;
Maalmaha iyo bilaha Ingiriisku waa inay ku bilaabmaan xaraf weyn.
Uma baahnid inaad isticmaasho ereyga oo dhan markaad ka hadlayso maalmaha iyo bilaha. Waxa kale oo aad u adeegsan kartaa soo gaabinta halkii, gaar ahaan qoraallada dhaadheer.
Ereyga Bisha, oo aan ku tilmaamno taariikh ahaan Ingiriisi, waxaa loo isticmaalaa Bil. Ereyga bilo wuxuu uqaadayaa magaca dambe bilaha. Waa maxay macnaha maalinta oo af Ingiriisi ah Su’aashu sidoo kale waa yaabe. Ereyga Maalin waxaa loo tiiriyaa "Maalin", Maalmahana waxaa lagu naanaysaa -s oo ah qaab "Maalmo". Qeybta soo socota, waxaan ku arki doonaa qeybaha maalmaha usbuuca lagu kala saaray Ingiriisiga.
* Erayada jamac ingiriisiga ah kudarsada -s, -es sida dabakhyo ahaan, waxay kuxirantahay erayga.
Maxay yihiin Maalmaha Usbuuca ee Ingiriisiga?
Toddobaadka kalandarka waxaa ku jira toddoba maalmood. In kasta oo maalin kasta ay leedahay qoraal iyo cod u gaar ah, haddana dhammaantood waxay leeyihiin wax ay wadaagaan. Wuxuu ku egyahay erayga "Maalin", oo macnaheedu yahay Maalin dhan. Macluumaadkan ayaa shaqadaada ka yara fududayn kara markaad iskudayeyso inaad xafiddo magacyada maalmaha.
Liistada hoose, waxaad kaheleysaa ereyadii Ingriiska ee waagaas, oo loo soo gaabiyay qawska iyo waxa u dhigma ee Turkiga ah. Ka dib waad baari kartaa sharraxaadda kooban ee mid kasta oo ka mid ah ereyadan, asalkooda iyo sida loogu adeegsado weedh. Waxaa jira habab badan oo aad codsan karto si aad u xafido maalmaha.
Mid ka mid ah kuwan waa habka loo shaqeeyo iyadoo erey kasta la qoro shan jeer. Qaab kale oo wax ku ool ah ayaa ah in loo diyaariyo waraaqo yaryar oo Ingiriis ku qoran dhinac ka mid ah turkiga dhinaca kalena lagala shaqeeyo habka loo sawiro waxna loogu akhriyo si aan kala sooc lahayn. Isla mar ahaantaana, waxaad ku qori kartaa ereyo Ingiriis ah qaybo ka mid ah qolkaaga waxaadna diyaarin kartaa oo dhajin kartaa waraaqo yaryar si had iyo jeer ay hortaada kuugu jiraan.
Isniinta (Isniinta): Isniinta
Talaado (Talaado): Talaado
Arbaco (Arbaco): Arbaco
Khamiis (Khamiis): Khamiis
Jimco (Jimce): Jimce
Sabti (Sabti): Sabti
Axad (Cadceed): Axad
Isniinta Waa Maalintee?
Isniinta waa maalinta koowaad ee usbuuca. Qaabka Isniinta, warqadda ugu horreysa waxaa lagu qoraa caasimadda. Xitaa haddii loo adeegsado jumlad, xarafka ugu horreeya had iyo jeer waa la weyneeyaa. Soo gaabistiisa waxaa lagu tilmaamayaa Isniinta. Sida loogu dhawaaqo ereyga Isniinta Jawaabta su'aasha ayaa ah in loo aqriyay "mandey".
Waxaa jira fikrado kala duwan oo ku saabsan asalka maalin kasta ee usbuuca oo Ingiriisi ah. Gaar ahaan Isniinta, Sabtida iyo Axadda, magacyadooda waxaa loo maleynayaa inay ka yimaadeen meydadka samada. Erayada loo malaynayo inay ka soo jeedaan ereyada Saturn, Moon iyo Sun, erayga Dayax, oo u dhigma turkiga Dayaxa, waa asalka ereyga Isniinta.
Xukunnada Tusaalaha ah Isniinta - Isniinta
Waa inaad wareejisaa shaqadaada illaa Isniinta.
Waxaad ku wareejin doontaa shaqadaada guriga ilaa Isniinta.
Shaqada guriga ayaa la sugayaa Isniinta soo socota.
Shaqada guriga ayaa la keenayaa Isniinta soo socota.
Talaado Waa Maalintee?
Talaado waa maalinta labaad ee usbuuca. Warqada ugu horeysa ee qaabka Talaadada waxaa lagu qoraa caasimada. Xitaa haddii loo adeegsado jumlad, xarafka ugu horreeya had iyo jeer waa la weyneeyaa. Soo gaabistiisa waxaa lagu tilmaamaa Tue. Tuesday Sida loogu dhawaaqo ereyga Jawaabta su'aasha waa in loo aqriyaa "tyuzdey".
Asalka ereyga Talaadada waxaa loo maleynayaa inuu ka yimid Tyr, a mythological Norse God.
Talaado - Weedho muunad ah oo ku saabsan Talaadada
Maanta waa maalin? - Maanta waa Khamiis.
Maanta waa maalin? - Maanta waa Talaado.
Maalmaha shaqada waa: Isniinta, Talaadada, Arbacada, Khamiista, iyo Jimcaha.
Maalmaha shaqada: Isniinta, Talaadada, Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha.
Golaha Baarlamaanka Qaranka Turkiga ayaa kulmi doona Talaadada.
Golaha Qaranka ee weyn ee Turkiga ayaa kulmi doona Talaadada.
Arbaco Waa Maalintee?
Arbaco, Arbaco waa maalinta saddexaad ee usbuuca. Qaabka Arbacada, warqadda ugu horreysa waxaa lagu qoraa caasimadda. Xitaa haddii loo adeegsado jumlad, xarafka ugu horreeya had iyo jeer waa la weyneeyaa. Soo gaabinta waxaa lagu muujiyey sida Wed. Wednesday Sida loogu dhawaaqo ereyga Jawaabta su'aasha waa in loo aqriyaa "vensdey".
Arbacada asal ahaan waxay u ahayd Maalinta Wöden. Wöden, ama Odin, waxaa loo yaqaanaa inuu yahay ninka xukuma boqortooyada ilaahyada Norse. Ereygan, oo laga soo qaatay khuraafaadka, wuxuu is beddelay waqti ka dib wuxuuna noqday Arbacadii.
Arbaco - Weedho tusaale ah oo ku saabsan Arbacada
Ma haystaan ​​fasalo arbacada galabtii.
Ma jiraan wax fasallo ah galabnimada Arbacada.
Imtixaanka Arbacada ayaa adkaan doona.
Waa inaan soo gudbino qormo illaa Arbacada.
Waa inaan soo gudbino maqaal illaa Arbacada.
Khamiis Waa Maalintee?
Khamiista, Khamiista waa maalinta afaraad ee toddobaadka. Xarafka ugu horeeya ee qaabka khamiista waxaa lagu qoraa caasimada. Xitaa haddii loo adeegsado jumlad, xarafka ugu horreeya had iyo jeer waa la weyneeyaa. Soo gaabiskeeda waxaa lagu tilmaamayaa Thu. Thursday Sida loogu dhawaaqo ereyga Jawaabta su'aasha waa in loo aqriyaa "törzdey".
Asalka ereyga Khamiista wuxuu ka yimid Thor, ilaaha xoogga iyo ilaalinta, oo boos ku leh sheekooyinka Norse. Maalinta loo yaqaan 'Thor's Day' waxay bilaabatay in loo heeso illaa Khamiista waqtiga.
Khamiista - Weedho Sample ah oo ku saabsan Khamiista
Hooyaday way xanuunsanaysay ilaa khamiistii la soo dhaafay.
Maanta waa Khamiis.
Jimce Waa Maalintee?
Jimcaha waa maalinta shanaad ee toddobaadka. Qaabka Jimcaha, xarafka ugu horeeya waxaa lagu qoraa caasimada. Xitaa haddii loo adeegsado jumlad, xarafka ugu horreeya had iyo jeer waa la weyneeyaa. Soo gaabistiisa waxaa lagu tilmaamay Fri. Friday Sida loogu dhawaaqo ereyga Jawaabta su'aasha waa in loo aqriyaa "firaydey".
Jimcaha waxay ka timaaddaa ilaahadda Frigg, ama Freya, oo ahayd afadii Odin ee quraafaadkii Norse. Ereyga, oo loogu hadlay sidii Maalinta Freya, wuxuu isu rogay Jimce waqti kadib.
Jimco - Weedho muunad ku saabsan Jimcaha
Waxaan mar kale la kulmi doonaa dhakhtarka jimcaha soo socda.
Waxaan markale la kulmi doonaa dhaqtarka jimcaha soo socda.
Dhalashadaydu waxay ku beegan tahay jimcaha sanadkan.
Sannadkan dhalashadaydu waa Jimcaha.
Sabti Waa Maalintee?
Sabti, Sabti waa maalinta lixaad ee usbuuca. Waa isbuucaan. Waraaqda ugu horreysa ee qaabka Sabtida waxaa lagu qoraa xarfaha waaweyn. Xitaa haddii loo adeegsado jumlad, xarafka ugu horreeya had iyo jeer waa la weyneeyaa. Soo gaabistiisa waxaa lagu muujiyey Iib. Saturday Sida loogu dhawaaqo ereyga Jawaabta su'aasha waa inaad u aqriso sida "on line".
Sabtida waxaa laga soo qaatay magaceeda asalka erayga meerayaasha. Waxaa loo maleynayaa inuu asal ahaan ka soo jeedo Maalinta Saturn. Waqti ka dib wuu is badalay wuxuuna noqday Sabti.
Sample weedho ku saabsan Sabtida - Sabtida
Ka warran Sabtida soo socota?
Maanta waa Sabti berina waa Axad.
Axadda waa toddobaad, maalinta ugu dambeysa ee usbuuca. Waa isbuucaan. Qaabka Axadda, warqadda ugu horreysa waxaa lagu qoraa caasimadda. Xitaa haddii loo adeegsado jumlad, xarafka ugu horreeya had iyo jeer waa la weyneeyaa. Soo gaabistiisa waxaa lagu sheegay Sun. Sunday Sida loogu dhawaaqo ereyga Jawaabta su'aasha ayaa ah in loo aqriyay "sandey".
Axadda waxay magaceedu ka soo jeedaa asalka ereyga qorrax. Maalinta Qorraxda macnaheedu waa Maalinta Qorraxda. Waqti ka dib, way fududaatay waxayna noqotay Axad.
Axad - Sample weedho ku saabsan Axadda
Waxaan aadi doonnaa tamashleyn Axadda soo socota.
Waxaan aadeynaa jimicsi axada soo socota.
Waa inaan isguursano Axada soo socota.
Waxaan isguursaneynaa axada soo socota.
Su'aalaha Tababarka ee Maalmaha Ingiriisiga
1.Haddii shalay ay tahay Arbaco, maanta waa maanta?
a) Axad b) Talaado c) Isniinta d) Khamiis
2.Haddii shalay ay ahayd Axad, waa maalin berri?
a) Isniinta b) Talaado c) Khamiis d) Sabti
3.Haddii maanta ay tahay Jimce, maalintee ayay ahayd shalay?
a) Khamiis b) Arbaco c) Talaado d) Sabti
4.Haddii berri ay tahay Arbaco, maanta ayay ahayd maanta?
a) Axad b) Khamiis c) Isniinta d) Talaado
5.… .. waa maalinta ku xigta Axadda waxayna badanaa muujisaa bilowga usbuuca shaqada.
a) Talaado b) Sabti c) Isniinta d) Sabti
Qaar ka mid ah su'aalaha tusaalaha ah:
Waa maxay maalinta 3aad ee toddobaadku?
Maxay yihiin maalmaha usbuuca?
Sabti iyo Axad.
Maxay yihiin maalmaha shaqada?
Isniinta, Talaadada, Arbacada, Khamiista, Jimcaha.
Isniinta Talaado Arbaco Arbaco Khamiis Jimco.
Waa maxay maalinta ugu horreysa ee dugsiga la aado?
Waa maxay maalinta koowaad ee dugsiga?
Maalintu waa maalin ciid ah?
Waa maxay fasax?
Imisa maalmood ayaa jira sanadkii?
Jumlado Sample ah Maalmo oo ku qoran Ingiriis
Maanta waa maalinta koowaad ee usbuuca: Maanta waa maalinta koowaad ee usbuuca.
Isniinta waa maalinta koowaad ee usbuuca. : Isniinta waa maalinta koowaad ee usbuuca.
Talaado waa maalinta labaad ee usbuuca. : Talaado waa maalinta labaad ee usbuuca.
Hooyaday ayaa imaan doonta Jimcaha. : Hooyaday ayaa imaan doonta Jimcaha.
Waxaan ku soo laaban doonaa iskuulka Isniinta soo socota maxaa yeelay wali waan xanuunsanahay: Waxaan ku laaban doonaa iskuulka Isniinta soo socota maxaa yeelay wali waan jiranahay.
Waxaan iibsan doonaa boorso cusub Jimcaha: Jimcaha, waxaan iibsan doonaa boorso cusub.
Toddobaadkii waxaa jira toddoba maalmood: Waxaa jira toddoba maalmood usbuucii.
Waxaa jira 52 toddobaad sanadkii: Waxaa jira 52 toddobaad toddobaad.
Axada waxaa loogu magac daray qorraxda: Axada waxaa loogu magac daray Qorraxda.
Maalinkee toddobaadkee ayaad ugu jeceshahay? : Maalinkee toddobaadkee ayaad ugu jeceshahay?
Waxay u egtahay inaysan joogi doonin Isniinta.
Uma badna inay Isniinta halkaas joogaan.
-Haddaba, wax badan iiga sii sheeg wixii ka dhacay shineemada Isniintii hore.
Si faahfaahsan ii sheeg waxa ka dhacay tiyaatarka filimka Isniintii hore.
-Ma jeclaan laheyd inaad taariikh ila gasho Isniinta?
Ma jeclaan laheyd inaad taariikh ila gashid Isniinta?
-Ma ogtahay fasax kasta, oo la xuso Isniinta?
Ma ogtahay ciidaha / ciidaha la xuso Isniinta?
-Iskuulkii waa la xiray Isniintii la soo dhaafay, maxaa yeelay wuxuu ahaa maalin fasax ah.
Iskuulka ayaa la xiray Isniintii la soo dhaafay maadaama uu ahaa ciidaha / ciida.
Hadda oo aad ogtahay maalmaha usbuuca, waxaad u baahan doontaa erayada khuseeya si aad ugu ridi karto xukun. Waxaad si fudud ugu adeegsan kartaa weedhahan si waafaqsan qaabka weedha. Ku sameynta jumlado Ingiriis aad ayey u fududdahay markaad ogaatid weedhaha aasaasiga ah. Si loo xafido qaababkan, markale, Hababka barashada Ingiriisiga Waad isticmaali kartaa oo aad ku xoojin kartaa adoo inta badan u isticmaalaya nolol maalmeedkaaga
Waa kuwan erayada iyo tibaaxaha aad ku isticmaali karto maalmaha usbuuca oo af Ingiriisi ah;
Maanta - Maanta
Berri - Berri
Shalay - Shalay
Subax - Subax
Galab - Galabnimo (12: 00-17: 00)
Fiidka - Fiidka (Inta u dhaxeysa 17:00 iyo 21:00)
Fasaxa maalinta - Isbuucaan (Waa la isticmaali karaa halkii laga isticmaali lahaa Sabtida iyo Axadda).
Toddobaadkii waxaa jira toddoba maalmood.
Maanta waa Sabti.
Talooyin ku saabsan Mawduuca Maalmaha Ingiriisiga
Gaar ahaan heesaha iyo sheekooyinka gaagaaban waxaa loo isticmaali karaa marka la sharxayo mowduuca maalmaha ee Ingiriisiga. Heesaha noocan ah oo aad ugu habboon ardayda dugsiga hoose, waxay sii waarayaan markii si taxaddar leh loo dhageysto iyo dhowr jeer. Carruurta isku dayaysa inay la socdaan heesaha waxay si fudud uga baran karaan akhrinta iyo u dhigma ee maalmaha.
Sida goob kasta, aad ayey muhiim u tahay in lagu dhaqmo barashada Ingiriisiga. Markaad ku celceliso maalmo Ingiriis ah maalmo yar, adoo u adeegsanaya jumlado, dhageysiga heesaha ku saabsan maalmaha Ingriiska, ama akhriska buugaagta qaar, waxaad ka helaysaa tababar ku filan arintan. Gaar ahaan nolol maalmeedkaaga, waxaad si buuxda u xoojin doontaa adoo adeegsanaya mowduuca maalmaha Ingiriisiga ee weedhahaaga si joogto ah.
Qoraallo tusaale ah oo ku saabsan maalmaha usbuuca oo Af Ingiriisi ah:
Ii sheeg, waa maxay maalmaha toddobaadku?
Waxaad haysataa Isniintaadii, Talaado, Arbaco, Khamiis, Jimco, Sabti, Axad, sidoo kale
Hadda, ku celi hooyada hooyada ka dib, halkan ayaan tagnaa
Xukunka loo adeegsan jiray in la weyddiiyo maalinta ay tahay maalinta Ingiriisiga;
waxaan dhihi karnaa.
Macluumaad muhiim ah *
Marwalba waan socdaa Axadaha. (Had iyo jeer waxaan aadaa socod lug ah Axadda.)
Sida lagu arkay jumlada, erayga Axad wuxuu qaatay sifudud -s. Maalmaha waxaa had iyo jeer loo adeegsadaa weedho iyada oo aan wax dhejino ah lahayn. Laakiin kaliya haddii aad dhihi doonto wax khaas ah maalintaas, waa inaad soo qaadataa labo dahab ah. Tusaale ahaan, jumladda kor ku xusan, erayga Axad wuxuu u qaataa dhejiska -s maxaa yeelay wuxuu socdaa oo keliya Axadda.
Markaad tilmaamayso maalmaha, hordhaca ah ee toban ama in loo isticmaalo bilowga. Sidoo kale mararka qaarkood way jahwareersan tahay qaabka loo adeegsanayo markii la qeexayo maalmaha usbuuca. Adeegsiga mudada hore ee waqtiga way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran sida aad ugu isticmaasho maalinta usbuuca jumlada iyo macnaha jumlada. Hordhaca "in" waxaa loo isticmaalaa marka laga hadlayo fikradda toddobaad guud ahaan, iyo "marka" marka maalin gaar ah ee usbuuca la xuso.
Isniinta, Axadda, Talaadada.
Sidee Loo Kala Saaraa Maalmaha Toddobaadka?
Toddoba maalmood usbuucii ayaa loo qaybiyaa laba qaybood. Waxaa jira laba maalmood oo Ingiriis ah sida maalmaha shaqada iyo dhammaadka usbuuca. Micnaheedu waa maalmaha shaqada ee Ingiriisiga “Maalmaha usbuuca”Muujinta ayaa la isticmaalay.
Maalmaha-toddobaadlaha- Maalmaha Toddobaadka
Toddobaadka - Usbuuca
Hooyaday rootiga iyo buskudka ayay dubtaa dhamaadka usbuuca.
Hooyaday waxay dubtaa rootiga iyo buskudka maalmaha fasaxa.
Sato waxay ku tababbarataa qaansoleynta maalmaha fasaxa ah.
Mudane Sato wuxuu qabtaa falaarta fallaadha dhamaadka usbuuca.
Maxay yihiin waxyaabaha aad sameyso maalmaha fasaxa ah?
Waxyaabo noocee ah ayaad qabtaa dhammaadka usbuuca?
Qoraal Muunad u ah Muxaadaro Maalmo Ingiriis ah
Maalmaha Ingiriisiga muxaadarooyinku waxay noqon karaan maaddo adag, gaar ahaan ardayda dugsiga hoose. Si taas loo sharraxo, adeegsiga qoraal qaab gaar ah oo lagu lafagurayo qoraalkaan ayaa hadhow noqda qaab waxbarasho oo joogto ah. Tan darteed, macalinka ayaa marka hore u akhriya qoraalka fasalka ka dibna wuxuu baraa erey kasta oo qoraalka ku jira mid mid.
Waxaa jira 7 maalmood usbuucii. Maalmahan waa: Isniinta, Talaadada, Arbacada, Khamiista, Jimcaha, Sabtida iyo Axadda. Maalmaha shaqada: Isniinta, Talaado, Arbaco, Khamiista, Jimcaha. Maalmaha Axadda: Sabtida iyo Axadda. Waxaa jira 365 maalmood sanadkii. Bishii waxaa jira 28, 30 ama 31 maalmood.
Waxaa jira 7 maalmood usbuucii. Maalmahan waa: Isniinta, Talaadada, Arbacada, Khamiista, Jimcaha, Sabtida iyo Axadda. Maalmaha shaqada: Isniinta, Talaadada, Arbacada, Khamiista, Jimcaha. Maalmaha Axadda: Sabtida iyo Axadda. Waxaa jira 365 maalmood sanadkii. Bishii waxaa jira 28, 30 ama 31 maalmood.
Ogaanshaha maalmaha usbuuca oo faahfaahsan siyaabo badan ayey nooga faa'iideystaan. Xaqiiqdii waxaan u isticmaalnaa maalmaha dhammaan dhinacyada nolol maalmeedka sida jadwalka, ballanta, kulanka ganacsiga. Aad bay muhiim u tahay inaad isticmaasho maalmaha weedhaha. Imtixaan aad qaadi doontid ama xaalado kale oo badan, waxaad la kulmi kartaa arrinta maalmaha. Sidaa darteed Maalmaha usbuuca ee ingiriiska Waa inaad maadada si taxaddar leh u barataa.
Maaddaama Ingiriisigu yahay luqad aan loo akhriyi karin sida ay u qoran tahay, waa inaad hubaal dhegeysataa sida loogu dhawaaqo ereyada markii aad bilowdo barashada. Waa inaad tan dhowr jeer tijaabisaa adigoo ereyga kor ugu qaadaya isla markaaba dhageysiga qaamuuska. Ku soo noqnoqoshada ereyada aad hada soo baratay ilaa dhawaqyadu ay gebi ahaanba ka soo baxayaan oo si cad u keenayaan waxbarasho aad u joogto ah Barashada kaliya higaada eraygu kuma filna Ingiriisiga. Sidoo kale waa inaad barataa sida loogu dhawaaqo oo aad si joogto ah ugu adeegsato isgaarsiinta. Waxaad si dhaqso leh ugu keydin kartaa ereyada cusub xusuustaada, gaar ahaan dhageysiga heesaha Ingiriiska.
Sidoo kale waa in la ogaadaa in marka la isticmaalayo unugyada waqtiga Ingiriisiga, maalmaha, bilaha, iyo mararka qaarkood xitaa xilliyada la wada isticmaalo. Guud ahaan, xukun amar gaar ah ayaa lagu dabaqayaa isticmaalkooda. Waxaa loo qoray qaab maalinta koowaad ka dibna bisha xukunka. Noocyada bisha iyo maalinta ee kuxiran midba midka kale iyadoo loo adeegsanayo horudhaca waqtiga mar kale waa mawduuc barasho Ingiriis ah oo si joogta ah uga soo muuqan doona nolol maalmeedka.
Dib ugu soo noqoshada erayada la bartay had iyo jeer waxay ku siinayaan tusaalooyin cusub sidaa darteedna waxay ereyadaas ku xoojinayaan maskaxdaada. Dhinaca kale, barashada ereyada cusub iyo tibaaxaha ayaa muhiim u ah dhismaha ereyadaada, gaar ahaan luqad ereyo aad u tiro badan leh sida Ingiriisiga. Mawduuca maalmaha Ingiriisiga waa mowduuc aad si fudud ugu tababbaran karto una adeegsan karto si joogto ah. Haddii aad si lama filaan ah u bilowdo barashada Ingiriisiga adiga oo rajeynaya inaad sixir u barato wax kasta iyo maaddo kasta, waxaad u badan tahay inaad wareersan tahay oo aad ka qaboobi doontid shaqadan barashada muddo aad u dheer.
Ma leedahay saaxiibo ama aqoon kuu leh oo khadka tooska ah ugu soo qoro Ingiriis? Ha moogaanin iyaga quudinta wararkaaga. Sawirada iska dhaaf sheyga ay wadaagaan hana ilaawin inaad maalin walba ogaato hal ama labo qof. Waxay noqon karaan warar ama maqaallo joornaal, fiidiyowyo, khudbado, qoraallo baloogyo ah, heeso, ama wax kale: haddii ay tahay Ingiriis iyo mowduuca aad xiiseyneyso, way ku caawin doontaa. Ha iloobin inaad tallaabo tallaabo tallaabo ah u qaaddo, adigoo yaaban oo baadhaya.
Qoraallada dhammaadka maalmaha Ingiriisiga
Sida maaddo kasta markaad baraneyso luqad cusub, ku celcelinta iyo ku dhawaaqidda saxda ah ayaa fure u ah caawinta ereyada cusub ee ku sii jiraya xusuustaada. Sababtaas awgeed, hoosta adiga ayaa kula wadaagaya Ku celcelis su'aalaha ku saabsan maalmaha Ingiriisiga ve Maalmaha Ingiriisiga weedho muunad ah Waxaad ka akhrisan kartaa qaybta. Waxaad kaga jawaabi kartaa weedhaha halkan adoo ku qoraya warqad yar.
Markaad go'aansato inaad barato Ingiriisiga, mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad barato waa maalmaha Ingiriiska. Barashada qaybtaan waxay si buuxda uga dhigan tahay barashada ereyada aad inta badan u adeegsan doonto nolol maalmeedkaaga. Qodobkaan Sida loo qoro maalmo Ingiriisiga, sida loogu dhawaaqo maalmo Ingiriisiga Waxaan diiradda saarnay mowduucyada noocaas ah.
Barashada maalmaha usbuuca ee Ingiriisiga aad ayey muhiim ugu tahay barasho kasta oo luqadeed. Ogaanshaha sida loo yiraahdo maalmaha usbuuca, laga bilaabo ballan qabsashada illaa hudheel la dhigto, waa qayb muhiim u ah wada hadalka maalinlaha ah. Nasiib wanaagse, barashada maalmaha usbuuca ee Ingiriisiga waa fududahay waxaanan haynaa talooyin ku saabsan sida lagaa caawiyo inaad xusuusato.
Waxaad badanaa isticmaali doontaa maalmaha iyo bilaha markaad ballan sameysaneysid ama aad qabanqaabinaysid kulan, gaar ahaan haddii aad rabto inaad ku takhasusto ganacsiga Ingiriiska. Sidaa darteed, waa inaad maadadan si fiican u barataa iskuna daydaa inaad si habsami leh ugu hadasho. Waxa kale oo aad adeegsan kartaa habka ku darista Ingiriisiga nolol maalmeedkaaga, taas oo ah mid ka mid ah hababka aasaasiga ah ee barashada Ingiriisiga.